Amiirka Qatar iyo madax kale oo dhambaal tacsi ah soo gaarsiiyey Madaxweyne Farmaajo iyo Kheyre | Xaysimo
Home War Amiirka Qatar iyo madax kale oo dhambaal tacsi ah soo gaarsiiyey Madaxweyne...
Amiirka Qatar iyo madax kale oo dhambaal tacsi ah soo gaarsiiyey Madaxweyne Farmaajo iyo Kheyre
Sheekh Tamiim Bin Xamd Al-thaani, Amiirka dowladda Qatar ayaa dhambaal tacsi ah u diray Dowladda Soomaaliya, gaar ahaan Madaxweyne Farmaajo, midaasi oo uga tacsiyadeeyay geeridii xanuunka badneyd ee Alle-ha-unaxariiste Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde).
Tamiin ayaa Alle uga baryey Nuur Cadde in uu naxariistiisa ku galado, isla markaaana uu samir iyo iimaana ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay, iyo guud ahaanba Umadda Soomaaliyeed ee meelkasta oo ay joogaan.
Sidoo kale, geerida ku timid Alle-ha-unaxariiste Nuur Cadde waxa dowladda Soomaaliya iyo umaddaba uga tacsiyadeeyay Amiir kuxigeenka Qatar iyo Ra’iisal wasaaraha dalkaasi, Cabdullahi Bin Xamad Al-thaani iyo Khaalid Bin Abdulaziz Al-thaani, iyagoo dhambaal tacsi ah u soo diray Ra’iisal wasaaraha dalka, Kheyre.
Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya, Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) ayaa waxa uu ku geeriyooday dalka Ingiriiska, xili uu soo ritay xanuunka dunida faraha kulul ku haya ee Coronavirus.
Madaxda dalka oo uu hormuud u yahay Madaxweyne Farmaajo ayaa iyaguna waxay ka tacsiyeeyen Marxuumka Alle-ha-unaxariiste, iyadoona Madaxweynuhu uu sheegay in Saddex cisho oo baroor-diiq ah loo sameyn doono Nuur Cadde, isla markaana Calanka dalka hoos loo dhigi doono.